Imiyalelo eli-10 yoPhuculo lweWebhu lwale mihla | Martech Zone
Imiyalelo eli-10 yoPhuculo lweWebhu lwale mihla
Lwesine, ngoFebruwari 15, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Unxibelelwano ngundoqo njengoMphathi weMveliso kunye nenkampani yesoftware. Kutshanje, ndisebenze ndaza ndapapasha le miyalelo ilandelayo yophuhliso lwewebhu lwanamhlanje ukuze isasazwe kumaqela ethu. Wonke umakhi wewebhu wale mihla (okanye usetyenziso) kufuneka alandele le mithetho ilishumi.
Kukho izinto ezintle imigaqo yenkqubo enokuphoswa ngaphandle ngenxa yazo zonke ezi zinto; Nangona kunjalo, injongo yam yayikukubeka ezi zinto ezifanayo ukuba iingcali zesoftware (kwaye nawe) unokuziqonda.
Soloko uxhasa i-99% yabasebenzisi be-intanethi, ngaphandle kwesikhangeli, uguqulelo lwesikhangeli, okanye inkqubo yokusebenza. Lungisa ngokufanelekileyo kwaye uhlale uzilungiselele ngokukhutshwa kwe-beta.
Soloko usebenzisa ikhowudi ehambelana neXHTML yesicelo, ireferensi yi-DTD kunye nesikhangeli esinqamlezileyo esivumelana nesitayile seCascading Sheets kuzo zonke izitayile zobeko kunye nemifanekiso yesicelo.
Soloko ubhekisa kwisicatshulwa kunye nentambo ngezinto zesalathiso ezixhasa naluphi na useto lomlinganiswa kwaye ungaze ufune ukwakhiwa
Ngamaxesha onke ireferensi imihla kunye namaxesha kwi-GMT evumela nawuphi na umsebenzisi ukuba aguqule iziphumo ngendlela abanqwenela ngayo.
Njalo yakha into yokudibanisa kuyo yonke into.
Soloko wakhela kwimigangatho yeRFC (okubhaliweyo, ii-imeyile ze-HTML, iidilesi ze-imeyile, izingqinisiso zesizinda, njl.
Njalo yakha imodyuli. Ukuba kukho ukhetho olungaphezulu kwesinye naphi na kwisicelo, uya kuba nakho ukongeza ngaphezulu ngaphandle kokufuna ukwakha.
Ukuba ngaphezulu kwenxalenye enye yesicelo iyayenza, zonke iinxalenye zesicelo kufuneka zibhekise kwindawo enye.
Ungaze uphinde wenze into onokuyithenga kwaye uhlala uhlengahlengisa usetyenziso lwethu ukuxhasa into oyithengileyo.
Ukuba abasebenzisi bayayenza, siyayixhasa. Ukuba abafanele bayenze, kufuneka siyivumele.
Yintoni yokuthenga iGeek enayo yonke into?
Ndivumile. Nangona kunjalo ngokusekelwe kwinqanaba le-7. Ndiyakholelwa ukuba nakuphuhliso lwewebhu, idatha, ukumelwa (GUI'S) kunye nengqiqo yoshishino kufuneka ihlale ihlulwe ngokusekelwe kwindlela ye-MVC esekelwe kwimodeli.
Oku kuya kwanda, umgangatho wesoftware, kunye nokulinganisa.
Enkosi, Andreas! Ngokuqinisekileyo ngumoya we- #7 - iintengiso zakho zentengiso zicace ngakumbi.